TG1702အလွှာနျ Standard PCB အပြာရောင်မှင် ENIG 1U "ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB Quickturn PCB FR4 ပစ္စည်း Fast Delivery - တရုတ် TG1702အလွှာနျ Standard PCB အပြာရောင်မှင် ENIG 1U "ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB Quickturn PCB FR4 ပစ္စည်း Fast Delivery ပေးသွင်း,စက်ရုံ -WMD
TG1702အလွှာနျ Standard PCB အပြာရောင်မှင် ENIG 1U "ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB Quickturn PCB FR4 ပစ္စည်း Fast Delivery
2 အလွှာအပြာရောင်မှင် ENIG 1U”
4 Layers အပြာရောင်မှင်ဘုတ်အဖွဲ့. base ပစ္စည်း FR4 Tg170 ဖြစ်ပါသည်. 1.6မီလီမီတာ±0.13မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့အထူ. နှစ်မြှုပ်ခြင်းကိုရွှေ 1u ", အဆိုပါ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် 1 ENIG မျက်နှာပြင်ကုသမှုနှင့်အတူအလွှာ. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်. PCB ညီလာခံထုတ်လုပ်သူ, အွန်လိုင်း PCB ဒီဇိုင်နာ, စျေးပေါ circuit board ။ ကျနော်တို့ပစ္စည်း FR4 ရှိ, Roger, Arlon, Nelco, Taconic, Teflon, CEM-1, CEM-3, လူမီနီယမ်, HIGH TG ဘုတ်အဖွဲ့, အမြင့် CTI,
PCB ပရိသတ်အဘို့ Smt PCB ညီလာခံသံမဏိဟာဖယောင်းစက္ကူများအတွက် Frame ကအတူ PCB လေဆာဟာဖယောင်းစက္ကူ
Multilayer 8layer impedance ထိန်းချုပ်ရေး immersive ရွှေ PCB ပေးသွင်း